Ciidamadii Puntland ee jiidaha hore oo iskaga baxay aagii dagaalka
Thursday March 08, 2018 - 12:04:14 in Wararka by Halgan News
Wararka laga helayo deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamadii Puntland ay baneeyeen jiidaha hore ee deegaankaasi kadib markii saraakiishii hogaaminasay ciidamadaasi ay sameeyeen gadood ciidan.
Warkan oo ay baahiyeen warbaahinta Puntland ayaa lagu sheegay in bixitaankoodu salka ku
hayo mushahar la’aan xoogan oo ay ciidamadu tabanayaan
Sidoo kale wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamadani si toos ah ugu ambabaxeen deegaano ka tirsan gobolka Bari iyaga oo sii maray magaalada Garoowe sida ay xaqiijiyeen dad ku sugan Garoowe. Ciidamada sii maray Garoowe ayaa la sheegay in ay wateen gaadiid ciidamadan oo gaadhaya ilaa 25 gaadhi oo nooca dagaalka ah.
Dhinaca kale wararka laga helayo degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamo kale oo ka tirsan Puntland ay ku biireen ciidamo ka tirsan Somaliland oo ku suganaa deegaankaasi kadib markii ay ka goosteen ciidamadii ay hore uga tirsanaayeen ee Puntland, waxaanay dhoweyn balaadhan ay kala kulmeen ciidamadani saraakiil ka tirsan ciidamada Somaliland oo ku sugan deegaanka Boocame ee gobolka Sool.
Xukuumada madaxweyne Gaas ayaan weli wax war ah ka soo saarin gadoodkan. Dhinaca kale ciidamo gadooday ayaa maalmo ka hor qabsaday Banka magaalada Qardho.